Semalt: २०२० SEO ट्रेन्ड्स
Semalt: २०२० SEO प्रवृत्ति
किन एसईओ प्रवृत्ति अनुसरण गर्नुहोस्?
एसईओ प्रवृत्ति २०२० का लागि
Bon बोनस चलन
< li> कसरी यी ट्रेन्डहरू पछ्याउने?
गुगल खोजी परिणामहरूको शीर्षमा वेबसाइटलाई दर्जा दिनको दौड कहिल्यै अन्त्य हुने छैन। वेबमास्टरहरू/साइट मालिकहरू/व्यवसायहरू/डिजिटल मार्केटरहरू प्राय: आफ्नो साइटको स्तर सुधार गर्न नयाँ एसईओ रणनीतिहरूको साथ आउँदछ।
तिनीहरूले त्यस्तो प्रयास गर्नुको अर्को कारण पनि छ। हो, तपाईंले यो सही अनुमान गर्नुभयो। यो किनभने गुगल नियमित रूपमा यसको एल्गोरिदम अपडेट गर्दछ। यदि एक वेबसाइट उच्च र्याक को आवश्यकता छ, यो नवीनतम निर्देशन, विकास, र गुगल द्वारा बनाईएको नियमहरु संग संगत हुनु पर्छ।
सरल शब्दहरूमा, एक वेबसाइटले नयाँ एसईआर (सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन) ट्रेन्डहरू SERPs (खोज इञ्जिन नतीजा पृष्ठहरू) मा उच्च स्तर पछ्याउँदछ।
किन SEO ट्रेन्डहरू अनुसरण गर्नुहोस्?
उत्तर एकदम सजिलो छ - र्या ranking्कि race रेस जित्नका लागि। तर यस रेसलाई जित्नका लागि, तपाईंले बुझ्नु आवश्यक छ एसईओ एक चलिरहेको प्रक्रिया हो, एक होईन एक पटकको घटना।
यसलाई अर्को तरिकाले बुझौं। गुगलको उद्देश्य उपयोगकर्ताको अनुभव बृद्धि गर्नु हो, र व्यवसायले बढी ग्राहकहरू, नाफा, र लोकप्रियता प्राप्त गर्न चाहन्छ।
दुबै संगै आएकाले जीत गर्न सक्छन्, पign्क्तिबद्धतामा काम गरेर। र, यो सम्भव छ जब वेबसाइट मालिक/वेबमास्टर्स/डिजिटल मार्केटरहरू भर्खरको एसईओ प्रवृत्तिको बारेमा सचेत छन्।
तसर्थ, तपाईं भर्खरको एसईओ प्रवृत्तिको साथ अपडेट हुनुपर्दछ भने। तपाई आफ्नो वेबसाइटलाई खोज परिणाममा उच्च श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ।
२०२० का लागि SEO ट्रेन्ड
यदि तपाई यसमा चम्किन चाहानुहुन्छ भने। अनलाइन संसार यस बर्ष र अधिक धेरै बर्षको लागि, २०२० को शीर्ष १० एसईओ प्रवृत्तिलाई विचार गर्नुहोस्।
१। अनुकूलित र उच्च-गुणवत्ता सामग्री सुनिश्चित गर्नुहोस्
एसईओ खेल सामग्री बिना केहि पनि छैन। यदि तपाईं २०२० मा सफल हुनु पर्छ भने, तपाईंको सामग्री मूल्यवान र सान्दर्भिक हुनुपर्छ।
चाहे तपाईंको वेबसाइटमा सामग्री लेख्ने अप, अडियो, भिडियो, वा कुनै अन्य फारम हो, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईसँग मानिसहरू यो शीर्ष-खाच बनाए।
गुगलले प्रयास गरिरहेको छ कि यसका क्रलरहरूले केवल इन्टरनेटमा उपलब्ध उत्तम सामग्री मात्र खोज्न सक्छन्। गुगलले यसमा अझै १००% सफलता हासिल गरेको छैन, तर तपाईं यसलाई छिट्टै नै आशा गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईले यसलाई केवल उच्च-गुणवत्ताको सामग्री राख्नको लागि आदत बनाउनुभयो भने। तपाईंको वेबसाइट, तपाईं भविष्यमा गुगलले प्रस्तुत गरेको कुनै पनि सामग्री सम्बन्धित दण्डहरूबाट अप्रभावित रहनुहुनेछ।
तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्ने अर्को कुराको प्रयोग कम गर्नु हो। सकेसम्म सानो कुञ्जी शव्दहरू। यसको सट्टामा, लामो पुच्छर कुञ्जी शब्दहरूमा फोकस गर्नुहोस्। यहाँ उद्देश्य भनेको समग्र रुपमा प्रयोगकर्ताहरुको प्रश्नहरु लाई सम्बोधन गर्नु हो।
२। ब्राण्ड निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुहोस्
यदि तपाईं इन्टरनेटमा प्रसिद्ध र भरपर्दो ब्रान्ड हुनुहुन्छ भने, तपाईं गुगलबाट मान्यता पाउनुहुनेछ र यसको खोज परिणाम पृष्ठमा उच्च श्रेणी। यसले आगन्तुकहरूको संख्या वृद्धि र उच्च राजस्वको परिणाम हुनेछ।
तपाइँले याद गर्नुहुनेछ कि वेबसाइटहरूले सोशल मिडियाबाट ट्राफिकको एक महत्त्वपूर्ण रकम प्राप्त गर्दछ। यो किनभने गुगल प्रयोग गर्ने धेरैजसो मानिसहरू सामाजिक मिडियामा छन्। जब उनीहरू सामाजिक मिडिया च्यानलहरु मा आफ्नो रुचि को लागी आउँछ, तिनीहरू मा क्लिक गर्छन्।
समयको साथ, व्यवसायहरूले निम्न दुई चीजहरू सिकेका छन्:
यदि तपाईंले वेब विश्वमा जित्नु छ भने। , तपाईं एक ठूलो ब्रान्ड हुनुपर्छ।
सोशल मिडियाले ट्राफिक बढाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
यसको मतलब तपाईंले सामाजिक मिडियाको मद्दत लिनुपर्दछ। तपाईंको साइटमा ब्रान्ड निर्माण र ट्राफिक बढाउँदै। २०२० मा, सामाजिक सुन्ने उपकरणहरूको प्रयोग गरी एक मजबूत ब्रान्ड निर्माण कार्यक्रमको साथ आउँनुहोस्।
< h3>।। स्थानीय जानुहोस्
व्यक्ति खोजी गर्ने तरीका परिवर्तन भएको छ। एक उत्पादन वा सेवा खोजी गर्दा, एकल कुञ्जी शव्द प्रयोग गरेर फेसन बाहिर छ। धेरै व्यक्तिले मुख्य कुञ्जी शब्द पछि "ठेगाना" वा "मेरो नजिक" जस्ता सर्तहरू थप्दछन्।
यसको मतलब अधिक र अधिक व्यक्ति नजिकको उत्पादन वा सेवा फेला पार्न रुचि राख्छन्। तिनीहरूको स्थान। यस प्रवृत्तिले स्मार्टफोनको लोकप्रियता पछि गति प्राप्त गर्‍यो, र यो केवल बढ्दो छ।
यस प्रवृत्तिबाट अधिकतम प्राप्त गर्न, तपाईं आफ्नो व्यवसायको गुगल मेरो व्यवसाय पृष्ठ र सबै स्थानीय खोजहरू लक्षित गर्नुहोस्।
स्थानीय जाँदै, कहिले पनि परम्परागत SEO लाई वेवास्ता गर्नुहोस्। धेरै व्यक्तिहरू तुलना गर्न र उत्पाद वा सेवाको बारेमा बढि विवरण प्राप्त गर्न इन्टरनेट सर्फ गर्छन्।
तिनीहरू तपाईंको वेबसाइट भ्रमण गर्न सक्छन् र यदि प्रासंगिक सामग्री हराइरहेको छ भने छिटो छोड्नेछ। तपाईंको साइटमा सामग्री विकास गर्ने क्रममा यी व्यक्तिहरूलाई नबिर्सनुहोस्।
।। मोबाइल उपकरणहरूलाई प्राथमिकता दिनुहोस्
यदि तपाइँले पछिल्लो वर्षको प्रवृत्ति समीक्षा गर्न मौका पाउनुभयो भने, तपाइँ त्यो पनि मोबाइल-पहिलो वा मोबाइल SEO पाउनुहुनेछ। हो, यो गत वर्ष महत्वपूर्ण थियो, र यो यस बर्ष पनि आवश्यक छ।
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्या प्रत्येक एसईओ रणनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्दछ। व्यवसायहरूले महसुस गर्नुपर्दछ कि आजकल मानिसहरू आफ्नो मोबाइल उपकरणहरूमा डेस्कटपको सट्टा सूचना खोज्न रुचाउँछन्।
नयाँ एसईओ रणनीतिहरूमा मोबाइल उपकरणहरू केन्द्रमा हुनुपर्दछ। डिजिटल मार्केटरहरूले मोबाइल रणनीतिहरू र व्यवसायका बिभिन्न उद्देश्यहरूमा प्रयोगकर्ताहरूले गरेको खोजीमा आधारित एसईओ रणनीतिहरू विकास गर्नुपर्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको वेबसाइट मोबाइल अनुकूल र अनुकूलित छ। मोबाइल उपकरणहरूमा उत्तम अनुभव प्राप्त गर्न। यदि तपाईंको साइट हैन भने, तुरून्त यसलाई मोबाइलमैत्री बनाउनुहोस्। थाहा छैन तपाईंले कति याद गर्नुभयो।
।। प्रयोगकर्ता अनुभव बृद्धि गर्नुहोस्
प्रयोगकर्ता अनुभव (UX) २०२० मा केन्द्रित हुनको लागि अर्को कुरा हो। यो बुझ्न आवश्यक छ कि UX ले प्रत्येक अनुभव समाहित गर्दछ SERP मा पहिलो अन्तरक्रियादेखि अवतरण पृष्ठमा, र त्यस पछाडि पनि।
प्राथमिक चिन्ता एउटा वेबसाइटमा प्रयोगकर्तालाई उत्तम अनुभव लिन मद्दत गर्ने उपाय खोज्नुपर्दछ। व्यवसायहरूले उनीहरूको साइट भ्रमण गर्ने मानिसहरूलाई मूल्य प्रदान गर्ने सोच्नु पर्छ।
यसका साथै वेबसाइट र यसको पृष्ठहरू छिटो लोड हुने छ। SERP मा स्निपेटमा के प्रयोगकर्ताहरू देख्छन् केवल अवतरण पृष्ठमा विस्तृत हुनुपर्दछ। गुगलले खोजी नतिजाहरू देखे पछि मानिसहरूले साइट भ्रमण गर्छन्। जब उनीहरूले जे देखे त्यो प्राप्त गरेनन् भने तिनीहरू असन्तुष्ट भए।
प्रयोगकर्ता अनुभव बृद्धि गर्न तपाईले यसका बारे विकासकर्ताहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। यदि पृष्ठ टेम्प्लेट पूर्ण रूपमा पुनः डिजाइनिंगको लागि आवश्यक छ भने, यसको लागि जानुहोस्।
।। BERT मोडललाई नबिर्सनुहोस्
BERT भनेको ट्रान्सफॉर्मरबाट द्विदिशात्मक एन्कोडर प्रतिनिधित्व हो। यो २०१ 2014 को रैank्कब्रेन पछि गुगलले प्रस्तुत गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो।
BERT मोडेलले बुझ्ने खोजहरू पहिले भन्दा राम्रो खोजिन्छ । एसईओ मार्केटरहरूले नोट गर्नुपर्नेछ कि BERT मोडल लागू गर्नाले गुगलको SERP मा उच्च श्रेणीको सम्भावना बढ्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ किन विशेषज्ञहरूले लामो-टेल किवर्डलाई मतदान गर्दछ?
किनभने तिनीहरू मध्ये धेरै कुराकानी प्रश्नहरू हुन्, र अन्ततः BERT लाई मूल्यवान छ। यसका लागि पूर्वसूचनाहरू, जस्तै, र अन्यले फरक पार्दछ र खोज क्वेरीको अर्थलाई रूपान्तरण गर्न सक्दछ।
गुगलले बीईआरटीको बारेमा कुनै निर्देशन जारी गरेको छैन, जसले बनाउँछ धेरैलाई उच्च सामग्रीमा सामग्री निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ।
BERT मोडेलका अनुसार सामग्री बनाउने उत्तम तरिका भनेको Google मा शीर्ष १० नतिजाको विश्लेषण गरेर। विशेष कुञ्जी शब्द। परिणामहरू लेनदेन, मार्गनिर्देशन, वा जानकारीमूलक छन् कि फेला पार्नुहोस्।
सामग्री निर्माण गर्नुहोस् जुन विश्लेषणमा आधारित छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्तम तरिकाले सेवा दिन्छ।
।। भ्वाइस खोजीले अधिक लोकप्रियता प्राप्त गर्दछ
कति पटक तपाईको स्मार्टफोनमा गुगलसँग कुरा गरेर केहि खोजी गर्नुभयो?
पछिल्ला भ्वाइस खोजी तथ्या statistics्क , मोबाइल उपकरणहरूमा खोज क्वेरीहरूको २०% भ्वाइसबाट आउँदछ।
भ्वाइस खोजी यति लोकप्रिय भइरहेको छ, धेरै व्यक्ति खोजी क्वेरीहरू टाइप गर्नुहोस् जस्तो कि यदि तिनीहरू गुगलसँग कुरा गर्दैछन्। लामो पूंछ कुञ्जी शब्दहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु यो अर्को कारण हो।
लामो प्रश्नहरू टाइप गर्ने धेरैजसो मानिस उनीहरूको खोजीको लागि निश्चित उत्तर चाहान्छन्। व्यवसायहरूले ध्यान दिनु पर्छ कि यी व्यक्ति हुन् जसले सब भन्दा धेरै रूपान्तरण गर्दछ।
भ्वाइस क्वेरीहरूको लागि खोजी परिणामहरूमा उच्च पद प्राप्त गर्न तपाईको सामग्री लेख्न निश्चित गर्नुहोस्। एक कुराकानीमा, प्राकृतिक तरीकाले साइट।
आवाज खोजीबाट अधिक बनाउन, प्रश्न-आधारित खोजीहरू फेला पार्नुहोस् र मूल्या ,्कन गर्नुहोस्, क्वेरी पछाडि प्रयोगकर्ताको आशय बुझ्नुहोस्, र कसरी तपाईं र गुगल सँगै उत्तम परिणामहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ तरिकाहरू फेला पार्नुहोस्।
एक आशावादी नोटमा, खोजीको भविष्य भ्वाइस हो।
8 । संरचित डाटा संरचना गुमाउनु हुँदैन
अब, यो स्पष्ट छ कि उच्च गुणवत्ता र अनुकूलित सामग्री एसईओ २०२० मा निर्णायक हुनेछ। तथापि, गुगल एल्गोरिदम सन्दर्भलाई पूर्ण रूपमा बुझ्दैनन्।
वेबमास्टर्सको जिम्मेवारी हुन्छ कि खोजी इन्जिनले सामग्रीको बारेमा सint्केत दिन्छ। यसले साइटको सामग्रीलाई राम्रो तरिकाले बुझ्न र खोजीकर्ताहरूको आशयको आधारमा परिणामहरू दिनको लागि खोजी ईन्जिन क्रोलरलाई मद्दत गर्दछ। कसरी एक पृष्ठको विभिन्न तत्वहरू उही पानाको अर्को तत्वहरूसँग सम्बन्धित छ। यसले क्रोलरहरूलाई कसरी पृष्ठ उही वेबसाइटको अन्य पृष्ठहरूमा कसरी जडान गर्दछ भन्ने बुझाइ प्रदान गर्दछ।
याद गर्नुहोस्, डाटाको संरचना एक पटकको प्रयास होइन। यदि तपाईंले यो गत बर्ष गर्नुभयो भने, यो सालको संरचनाको आवश्यक पर्दैन। त्यहाँ तपाइँको वेबसाइट को डेटा को ख्याल गर्न प्लगइनहरु छन्, तर विज्ञहरु अन्धा मा विश्वास नगर्ने सुझाव।
9। प्रभावकारीहरू एसईओ को मांग मा हुनेछ
आज, प्रभावकर्ताहरूले वेब ट्राफिकको एक महत्त्वपूर्ण अंश ड्राइभ गर्दछन्। मार्केटरहरू यस बारे सचेत भइरहेकाले उनीहरूको मार्केटिंग बजेटको ठूलो रकम यी व्यक्तिहरूमा खर्च गर्दछ।
ब्ल्ग/प्रभावकर्ता-विपणन-तथ्या /्क/# १०-सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण-प्रभावशाली-मार्केटिंग-तथ्या -्क-२०१ 2019 "> प्रभावकारी मार्केटि statistics तथ्या .्कहरू प्रभावकारी कम्पनीहरूको बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छन् भन्ने हाइलाइट गर्दछ। बजारहरूले ती सबै प्रकारका विज्ञापनहरूसँग थकित अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रामाणिक स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
तपाइँ प्रभावकारी मार्केटिंग एसईओसँग कसरी सम्बन्धित छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, प्रभावकारी मार्केटिंगले तपाईंलाई उच्च-गुणवत्ताको ब्याकलिks्क प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तिनिहरूले गुगललाई यो अनुभूति गर्न मद्दत गर्छन् कि तपाईको साइट प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयोगी छ। यसैले, यो खोजी परिणामहरूमा उच्च स्थानमा छ।
जब तपाइँ र एक प्रभावकर्ता सँगै काम गर्दछ, तपाइँ सजिलैसँग तपाइँको अनलाइन दृश्यता र तपाइँको साइट मा यातायात देख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले ध्यान दिनुपर्ने एक महत्त्वपूर्ण कुरा केवल तपाईंको आलामा सम्बन्धित प्रभावकारीहरूसँग मात्र साझेदार गर्नु हो। यदि तपाइँ को आला फेसन छ, तपाइँ एक प्रभावशाली साथ फैशन को दुनिया को बारे मा नवीनतम र गहन ज्ञान को साथ पार्टनर गर्नुपर्छ। यदि तपाइँ गर्नुहुन्न भने, तपाइँले अपेक्षित ROI प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न।
१०। भिडियोहरूले सामग्रीका अन्य सबै प्रकारहरूलाई पराजित गर्नेछ
सबैजना भिडियोहरू मनपर्दछ, गुगल पनि।
हो, भिडियोहरू शस्त्रागारको पछिल्लो एसईओ हतियार हो। डिजिटल मार्केटरहरूको। धेरै विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि भिडियोहरूसँग SERPs मा मात्र उच्च श्रेणीको उच्च सम्भावना छ तर अधिक क्लिक पनि गरियो।
सामग्रीको पाठ्य स्वरूपमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, २०२० भिडियोलाई समान ध्यान दिन वर्ष हो।
तपाईं आफ्नो अवस्थित सामग्रीको समर्थनमा YouTube भिडियोहरूको साथ आउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईंको भिडियो खोजी परिणामहरूमा देखा पर्दछ, तपाईं निश्चित रूपमा बढी ट्राफिक प्राप्त गर्नुहुनेछ।
भिडियोहरू तयारी गर्दा, यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईंले प्रयोगकर्ताको उद्देश्य राख्नुपर्दछ माथि यदि व्यक्तिले तपाईंको भिडियो उपयोगी फेला पार्दछ भने, तपाईं ट्राफिक र सment्लग्नतामा उल्लेखनीय वृद्धि देख्नुहुनेछ।
तपाईंले ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको भिडियो अनुकूलन गर्नु अनुसार तपाईंको ब्लग को चौड़ाई। यसले यूएक्सलाई मात्र बढावा दिदैन तर गुगललाई तपाईंको सामग्री अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ।
Bon बोनस प्रवृत्ति
तपाईंले भर्खर माथि पढ्नु भएको शीर्ष १० एसईओ प्रवृत्ति हुन्। २०२०। होईन, त्यहाँ धेरै अन्य चीजहरू छन् जुन तपाईंलाई यस बर्ष एसईओ मास्टर गर्न मद्दत गर्दछ। ती मध्ये केही यहाँ छन्:
सामग्रीको लम्बाइले खोज रैंकिंगलाई असर पार्दछ।
व्यक्तिले सर्वव्यापी डिजिटल अनुभवहरूको मजा लिनेछ।
खोज परिणामहरूमा चित्रित स्निपेटहरूको प्रभुत्व कहिँ पनि गइरहेको छैन।
यी ट्रेन्ड्स कसरी पछ्याउने?
तपाईको बारेमा थाहा छ २०२० को एसईओ प्रवृत्ति, र तपाईंलाई यो पनि थाहा छ कि यी प्रवृत्तिले तपाईंलाई सफलता हासिल गर्न मद्दत गर्दछ। तर ठूलो प्रश्न यो कसरी यो प्रवृत्ति पछ्याउने? यी चलनहरूबाट अधिकतम लिन के गर्ने?
तपाईको चिन्ताको उत्तर Semalt हो। यो एक डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी हो जुन एसईओ को प्रत्येक तत्व मा विशेषज्ञता छ। तपाईंको व्यापार नयाँ हो वा स्थापित, Semalt, यसको उत्पादनहरू र कुशल टीमको साथ, अनलाइन विश्वमा यसको लोकप्रियता बढाउन मद्दत गर्दछ।
यस कम्पनीको साथ अपडेट रहन्छ। पछिल्लो एसईओ प्रवृत्ति र घटनाहरू। तपाईं यसको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ पछिल्लो चलनहरूको अनुसरण गर्न र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको अगाडि रहन।